विराटनगरका मासु पसलमा बाख्राको मासु ! - Arunkhabar.com
प्रकाशित : १२ कार्तिक २०७४, आईतवार १५:४१
buy Super Tadarise online, order dapoxetine. विराटनगर, १२ कात्तिक । विराटनगरका मासु पसल र फ्रेस हाउसहरुमा खसीको भन्दै बाख्राको मासु किनबेच हुने गरेको पाइएको छ । मासु पसल संचालकले ग्राहाकलाई बख्राको मासु विक्री गरेर ठगी गर्ने गरेको पाइएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिका १७ रानीमा खसीको मासु भन्दै बाख्राको मासु विक्री गरिरहेका तीनवटा पसलका संचालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोश निरौलाका अनुसार प्रहरीले मासु पसल संचालकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि खसीको भन्दै बाख्राको मासु विक्री गरेर ग्राहकमाथि ठगी गर्ने गरेको पुष्टि भएको हो ।
उहाँले उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने गरेको पाइएपछि सबै पसलहरुमा प्रहरीले चेकजाँच र निगरानी बढाएको बताउनु भयो । पक्राउ परेका तीनै जना विरुद्ध सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गतको मुद्धा चलाउन म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । विराटनगरमा मात्रै दुई सय भन्दा बढी मासु पसल र फ्रेस हाउस संचालनमा छन् ।
तर सम्बन्धीत निकायले अनुगमन नगर्दा पसलको मनोमानी बढेर गएको उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुँगेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार विराटनगरका ५० प्रतिशत फ्रेस हाउस र मासु पसलहरुमा खसीको भन्दै बख्राको मासु विक्री भइरहेको छ ।valtrex
विराटनगर, ३ फागुन । प्रदेश १ सरकार जिम्मेवारीपूर्वक मितब्ययी ढंगबाट अघि बढेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले...